तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् तालिकाहरूको अनुक्रमणिका as the अनुक्रमणिका प्रकार.
यसबाट सिर्जना गर्नुहोस्
अनुक्रमणिका बनाउन सूचना संयोजन निश्चित गर्नुहोस्.
वस्तु क्याप्सनहरूबाट अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरू सिर्जना गर्दछ। एउटा वस्तुमा एउटा क्याप्सन थप गर्नलाई वस्तु चयन गर्नुहोस् र त्यसपछी घुसाउनुहोस् - क्याप्सन रोज्नुहोस्।
क्याप्सन कोटि चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं अनुक्रमणिका प्रविष्टिहरूका लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
तपाईँंले अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरूका लागि प्रयोग गर्न चाहेको क्याप्सनको भाग चयन गर्नुहोस्। निम्न तालिकाले "Illustration 24: The Sun" मा आधारित भएर, चयन गर्न सकिने क्याप्सन विकल्प सूचीकृत गर्दछ, जहाँ "Illustration 24" स्वत:तरीकाले उत्पन्न भएको हो र "The Sun" प्रयोगकर्ताद्वारा थप गरिएको हो।
चयनहरू प्रदर्शन सूची बाकसमा
दृष्टान्त २४: सूर्य
यदि तपाईँंले "क्याप्सन पाठ" चयन गर्नुभएमा,अनुक्रमणिका प्रविष्टीको क्याप्सनको प्रारम्भमा विराम चिन्ह र खाली स्थान देखा पर्दैन।
वस्तु नामहरूबाट अनुक्रमणिका प्रविष्टीहरू सिर्जना गर्दछ। तपाईँंले नेभिगेटरमा वस्तु नामहरू दृश्य गर्न सक्नुहुन्छ, र उदाहरणका लागि, तिनीहरूलाई प्रसङ्ग मेनुमा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ।